Jowhar.com : Somali Leader News - News: Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo saaka la kulmaya maamulada iska soo horjeeda
April 24 2014 22:47:27
Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo saaka la kulmaya maamulada iska soo horjeeda
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa oo xalay ku hoyday magaalada Baydhabo ayaa saaka la filayaa inay kulamo la qaataan dhinacyada iska soo horjeeda ee ku sugan magaalada.
Sida ay sheegayaan wararka Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari oo shalay gelinkii dambe gaaray Baydhabo ayaa saaka kula kulmaya Xarunta ADC Maamulka Lixda Gobol, iyagoo ka wada hadlaya sidii ay ula kulmi lahaayeen Madaxweynaha.
Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa xalay si wada jir ula kulmay Wasiirada iyo Xildhibaanada la socda ee ka soo jeeda Gobolada Koofur Galbeed, si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada Baydhabo.
Kooxda uu hogaamiyo Madoobe Nuunow ee Maamulka Lixda Gobol doortay ayaa shalay diiday inay la kulmaan Madaxweynaha, kadib markii ay sheegeen in aanay raali ka aheyn in Madaxweynuhu la kulmo Maamulka saddexda Gobol, maadaama aanay aqoonsaneyn.
Banaan baxyo ballaaran oo ay hogaaminayaan qaar ka mid ah Mas'uuliyiinta Maamulka lixda Gobol ayaa shalay ka dhacay magaalada Baydhabo, markii uu gaaray Madaxweynaha, waxaana dibad baxayaasha ka soo hor jeedeen in madaxweynaha la kulmo Maamulka saddexda Gobol ee fadhigooda yahay Hotelka Bakiin.
Shirka uu la qaadanayo Prof Jawaari xubnaha maamulka lixda Gobol ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan sidii wada hadalada u sii socdaan, si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed, waxaase la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan.
Sidoo kale xubnaha saddexda Gobol oo diyaar u ahaa inay la kulmaan Madaxweynaha ayaa waxaa ka hor-istaagay banaan baxayaasha oo xiray inta u dhaxeysa Hotelka Bakiin iyo halka Madaxweynaha degnaa ee Xerada 60aad, waxaana dibad baxayaasha ay dhagxaan iyo taayaro ku gubeen wadada, si aanay u gudbin xubahan.
Xaalada guud ee magaalada Baydhabo ayaa saaka degan, waxaana la ogeyn inta ay qaadan doonto shirarkan iyo xalka la doonayo in laga gaaro, waxaase laga yaabaa inay daba dheeraato wada hadalada ka bilowday magaalada Baydhabo.
Jowhar.com751,650 unique visits